Homeसमाचारनेपालमै बन्छ थोरै ल’गानिमा यस्तो आकर्षक घर, यो कम्पनी लाई जि’म्मा दिनुहोस्
October 24, 2020 admin समाचार 9217
कोरियाली क’म्पनि एसवाई प्या’नलले आफ्नो उत्पादन शुरु गरेको छ । फेब्रि’केटेड भवन निर्माण सम्बन्धि सामान उत्पा’दन गर्ने कम्पनीले यसै हप्तादेखि उ’त्पादन शुरु गरेको हो । नेपालका बिभिन्न जि’ल्लामा कम्पनिबाट विभिन्न रंगहरुमा छाना तथा वाल प्या’नलहरु उत्पादन शुरु गरेका छन् ।
बिभिन्न रंगको छाना र वाल २ देखि ६ इन्चीसम्म बाक्लो उत्पादन गरिने कम्प’नीले जनाएको छ। शतप्रतिशत को’रियन प्रबिधि र लगानीमा स्थापना गरिएको सो कम्पनिको उत्पाद’नहरु भुकम्प प्रतिरोधी,सस्तो ,६० बर्ष टि’काउ हुने जनाइएको छ ।
७२ करोड रुपैयाँ अधि’कृत पुंजी रहेको सो कम्पनीले नेपालमा पहिलो पटक आधुनिक प्रबिधिद्वारा प्यानल उत्पादन शुरु गरिएको जनाइएको छ । कम्प’निद्वारा उत्पादन हुने छाना र वाल गर्मि क्षेत्रका लागि बरदान हुने जनाइएको छ । सो छानाले ८ देखि १० डीग्रीसम्म तापक्रम रोक्न सहयोग गर्छ। यो प्रविधिले चितवन लगायत तराइबा’सिलाई गर्मिबाट बच्न ठुलो सहयोग गर्ने छ । त्यसैगरी पहाडी र हिमाली भागमा बसो’बासीका लागि पनि बरदा’ननै साबित हुने छ ।
१२ सय डिग्रीको ता’पक्रम कलर कोट गरिएको स्टील दुई तिर र बिचमा पोलि’ट़ाइरोन इन्सुलेसन गरिने भएकोले यो प्यानलले चिसो तातो रोक्न मद्दत गर्दछ । ४३ जिल्लामा डिलर वितरण गरिसकेको र कोल्डस्टोरको लागि चाहिने प्यान’लसमेत उत्पादन गरिरहेको कम्पनी’ले आधुनिक प्रविधिमै स्टीलको ढोका र यूपिभिसी झ्याल समेत उत्पादन तयारी गरिरहेको छ । एउटा सामान्य कारको मुल्य बराब’रमा साढे २ तला सम्मको घर नि’र्माण हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : साढे तीन लाखमै बन्छ सुवि’धा सम्पन्न दुई बेडरुमको घर सर’कारले भूकम्पबाट ध्वस्त भएका घर निर्माणको लागि दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा ग¥र्यो । यो घोषणा’पछि धेरैले आलोचना गर्दै भने, दुईलाख दिएर पनि घर बन्छ ? सामान्य रुप’मा हेर्दा दुई लाख सानो रकम हो ।
यति थोरै पै’साले कहाँ घर बन्ला ? तर दशकदेखि स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर घर बनाइ’रहेको एउटा कम्प’नीले डेढ लाखमा घर बन्ने दावी गरेको छ । हिमालयन ब्याम्बो प्रालि जसले डेढ लाखमै भूकम्प प्रति’रोधी घर बनाउने दावी गरेको छ ।
बाँसबा’ट निर्माण हुने यो घरमा एउटा एउटा बेडरुम र किचेन गरेर दुई कोठा हुनेछ । ट्वाइ’लेट घर बाहिर बनाउनु पर्छ । श्रमदान गर्ने हो भने यो घरको मूल्य अझै सस्तो हुन्छ । आफ्नो घर निर्माण गर्दा आफैले श्रम गरे लागत घट्छ । मुलुक’भित्रै बाँसका एक हजार घर बना’इसकेको कम्प’नीले यस्ता घर ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छन् ।
कोठाको घर डेढ ला’खमै निर्माण गर्छौ । मुलुकभित्रै रहेको बाँसबाट राम्रो घर निर्माण गर्न सकिन्छ,’ कम्पनीका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासं’घका पूर्व अध्यक्ष कुशकु’मार जोशीले बिज’मान्डूसँग भने, ‘घर निर्माणमा विदेशी सामा’नको प्रयोगनै गर्नुपर्दैन । स्वदेशी वस्तु’को प्रयोग हुने भएकोले सस्तो भएको हो ।’
भूकम्प’पछि सस्तो, छिटो र सजि’लोसँग घर निर्माण गर्न चासो बढेको छ । छिटो र सस्तो निर्माणका लागि यस्ता घर उत्तम हुन्छन् । कम्पनीले एक महिना भित्रै घर निर्माण गरेर ग्राहकलाई हस्ता’न्तरण गर्ने दावी गरेको छ । १५ दिनमा फाउन्डे’सन र १५ दिनमा घरनै निर्माण सकिने जानकारी पनि कम्पनीले दिएको छ ।
‘१५ दिनमा फाउ’न्डेसनको काम गर्नुपर्छ । अर्को १५ दिनमा बाँसबाट बनेका कच्चा पदार्थ ल्याएर जडान गर्छौ,’ उनले भने, ‘भूकम्प पी’डितका धेरै घर ध्वस्त भएका छन् । त्यसका लागि यो घर सबैभन्दा उत्तम छ ।’ कम्पनीले दुई बेडरुम, किचेन र ट्वाइले’टसहितको घर पनि निर्माण गरि’रहेको छ । यो घरको मूल्य भने साढे तीन लाख रुपैयाँ पर्छ ।
‘हामी ग्राहकले चाहे अनुसारको घर निर्माण गर्न सक्छौ । न्यून, मध्यम र उच्च आय भएका ग्राह’कको माग अनुसार घर निर्माण गर्न सक्ने क्षमता छ,’ अध्यक्ष जोशीले भने, ‘तर अहिलेको आवश्यकता भनेको भूकम्प पीडि’तको पुनस्र्था’पनाको हो । त्यसैले डेढ लाख र साढे तीन लाख रुपैयाँको घरलाई बढी लक्षित गरेका छौ ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले बाँसको घरको बारेमा जानकारी लिइसकेको छ । कम्पनीले एक हजार घर निर्माण गर्नसक्ने जान’कारी एनआरएनलाई दिएको छ ।
अरु घरजस्तै फाउन्डेस ढुंगा, सिमेन्ट र ईटाबाट तयार गरिन्छ । फाउन्डे’सन तयार भएपछि बाँसबाटै विम, चौकस लगा’यतका सम्पूर्ण सामाग्री तयार हुन्छ । कम्पनीले घरको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री हेटौंडामा रहेको आफ्नो उद्यो’गमा तयार गर्छ । फाउन्डेसन तयार भएपछि उद्यो’गबाट सामान ल्याएर प्राविधिकले जोड्ने काम गर्छन् । घरको छानामा टिन प्रयोग गरिन्छ भने भित्ता’मा बाँस प्रयोग हुन्छ । बाँसको भित्तामा सिमे’न्टले प्लास्टर गरिन्छ ।
कम्पनीले बाँस’बाट निर्माण भएको घरको आयु ३० वर्षको हुने दावी गरेको छ । ‘यो घरको ग्या’रेन्टी ३० वर्षको गरेका छौ । तर यो भन्दा बढी पनि टिक्छ,’ जोशीले भने, ‘ घर निर्मा’णलाई दिगो बनाउने हाम्रो प्रयास हो ।’
घर बनाउँदा प्रयोग हुने बाँसको आ’वश्यक ट्रिटमेन्ट गरिन्छ । कम्पनीका अनु’सार ट्रिटमेन्ट गरेपछि बाँसमा किरा लाग्ने समस्या’नै हुँदैन । यस्तो बाँसमा धुलिया लाग्ने समस्या पनि हुँदैन । बाँस आफै इन्सुलेटेड भएकोले विग्रिने स’मस्या पनि कम हुन्छ ।
साढे तीन ला’खमा दुई वटा कोठा, किचेन र ट्वाइलेट हुन्छ । घर ३ सय ६० स्क्वायर फि’टको हुन्छ । कम्पनीले घर निर्माण गर्दा चारवटा एलईडी वल्व, ट्वाइले’टको प्यान, किचेनमा सिङ्क समेत दिन्छ । बस्न मिल्ने घर बनाएर ग्राहकलाई दिने दावी कम्प’नीले गरेको छ ।
‘हामीले निर्माण गरेको घर ग्रा’हकले केही नगरी बस्न मिल्छ । घर निर्माण हुँदानै विद्यु’तका सबै सामाग्री जोडि’सकेको हुन्छ,’ जोशी’ले भने, ‘एउटा पूर्ण घर ग्राहक’ले पाउँछन् ।’
कम्प’नीले अहिलेसम्म एक हजार घर बनाइसकेको छ । कम्पनीले व्यक्तिगत, गैरस’रकारी संस्था, विद्याल’यलगायत लागि यस्ता घर बनाएको हो ।
कम्पनीले तीन सय स्क्वायर फिटको मुक्त क’मैयाको क्याम्प, विराट’नगरमा पाँच सय ८० स्क्वायर फिटको निजी आवास, मेलम्चीमा रिम्स नेपालको एक हजार स्क्वायर फिटको घर र एक हजार स्क्वायर फिटको ट्रेनिङ हल, आठ सय ८० स्क्वायर फिटको भवानी एकीकृत स्कुल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महा’संघको सुर्खेतमा टे«ड स्कुल, लेखनाथ उद्योग वाणि’ज्य संघको ट्रेनिङ हलल’गायत निर्माण गरिसकेको छ ।
विदे’शमा पनि बाँसकै घर
युएन हेबिट्याटले अल्पविकसित मु’लुकका गरिबहरुलाई बाँसबाट राम्रो घर बनाएको छ । पछिल्लो समयमा पुलदेखि विमानस्थ’लसम्ममा पनि बाँस प्रयोग भएको छ । सस्तो, टिकाउ र सजिलै बन्ने भएकोले गरिबको लागि मात्रै होइन अहिले अत्या’धुनिक घरहरु पनि बाँसबाटै निर्मा’ण भइरहेका छन् ।
युरोप, दक्षिण अमे’रिका र केही एसि’याली मुलुकमा बाँसकै पुल, विमानस्थल र घरहरु समेत निर्माण भएका छन् । यसले विस्तारै आधुनिक निर्माणका सामा’ग्रीलाई समेत विस्था’पित गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा ल्यापटप, मोबाइल फोन र अरु सामग्री समेत बाँसबाट निर्माण भएका छन् ।
पछिल्लो सम’यमा बाँसका घरले अन्तर्राष्ट्रिय मा’पदण्ड आईएसओ सर्टिफिकेट समेत पाइसकेका छन् । बाँसको घर गरिब होइन धनीको पनि भइसकेको र बाँ’सप्रति आम उपभोक्ता आर्कषित हुन थालेको जोशी बताउँछन् ।
‘डेढ लाखदेखि डेढ करोड’सम्मको घर बनाउन सकिन्छ । हामीले सस्तो मात्रै होइन कोही व्यक्ति’लाई अत्या’धुनिक घर चाहिएपनि बनाउन सक्छौ,’ उनले भने, ‘वि’देशमा ठूल–ठूला घर, विश्वविद्यालय समेत बाँस’बाट बनेका छन् ।
भूक’म्पपछि बाँस सम्वन्धी काम गरिरहेको संस्था इन्टरनेस’नल नेटवर्क फर ब्या’म्बोले दश हजार घर बना’उन सकिने बारेमा अध्ययन गर्न एउटा टोली नेपाल प’ठाउन लागेको छ । यही संस्था’ले इक्वेडर, कोलम्बिया, पेरु लगाय’तका मुलुकमा घर बनाइसकेको छ । यो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्त’र मापदण्ड अनुसार घर नि’र्माण गरिदिने जानकारी दिए । -इताजा खबर बाट
आज महाअष्टमी,किन बलि दिइन्छ जानुहोस्
April 9, 2021 admin समाचार 3356
मेडिकल कलेजमा २२ वर्षीया सं’क्रमितको शल्यक्रियामार्फत निका’लियो ३.७ किलोको बच्चा
May 7, 2021 admin समाचार 3801
नेपालगन्ज मे’डिकल कलेज कोहलपुरमा कोभिड संक्र’मित गर्भवतिको शल्यक्रियामार्फत बच्चा निका’लिएको छ । पेटभित्रको बच्चा ठूलो भएपछि एकहप्ता अगाडी नै शल्यक्रियामार्फत बच्चा निका’लिएको हो । गुलरिया नगरपा’लिका-५ बर्दियाकी २२ वर्षीया महिला’को सफल शल्यक्रिया गरि बच्चा निकालिएको
June 5, 2021 admin समाचार 2865